Ogaden News Agency (ONA) – Garabyadii TPLF oo Kala Ol-oolaysanaya & Xaaladaha oo Cakiran.
Garabyadii TPLF oo Kala Ol-oolaysanaya & Xaaladaha oo Cakiran.
Warar rasmi ah oo ay helayso wakaalada wararka Ogadenia ONA ayaa muujinaysa in uu meel xun gaadhay khilaafkii kooxda TPLF ee talada wadanka Itoobiya xooga kuhaysata.
xogtan oo aan kahelay ilo lagu kalsoon yahay ayaa muujinaysa in ay kooxdu ukala alaab uruursatay labo garab oo kala dagan magaalooyinka Addis Ababa iyo Maqale kuwaas oo biyaha isu mukhuursan.
khilaafka kooxda ayaa yimid kadib markay mowjado dad ah oo kuwii ay gumaysan jireen ah ay kukaceen waxayna kooxdu kukala aragti duwanaatay sidii loomaarayn lahaa kacdoonka sida xowliga ah usocda iyo waliba sidii loosii haysan lahaa xukunka wadanka.
Dhinaca kale xaalada wadanka Itoobiya ayaa lasheegayaa in ay tahay mid cakiran waxaana lagu soo waramayaa in dhibaatada wadanka kataagan ee dhan kasta ah ay tahay mid aan laqiyaasi karin.
Dadka kafaalooda arimaha Itoobiya ayaa sheegaya in sanadkan sii dhamaanaya uu ahaa kii ugu adkaa ee abid dadka Itoobiyaan ka ah soomaray waxayna xeel dheerayaashu sheegayaan in sanadkan uu yahay kii dadka iyo duunyadaba ugu daraa mudadii ay kooxda TPLF haysatay wadan.
Dhinaca kale kooxda TPLF ayaa lasheegayaa in ay ka faa’iidaysanayso xukunkii dag daga ahaa ee wadanka ay kusoo rogtay waxayna kooxdu dadkii ka dhigtay wax ay dilaan iyo wax ay bahdil kusameeyaan iyagoo hantida umada si badheedh ah u dhacaan.
Sidoo kale caalamka ayaa ogaaday dhagarta iyo beenta Itoobiya waxayna beesha caalamku xaqiijisay dhibaatooyinka isdaba jooga ah ee lagu hayo dadka shacabka ah.